Tag: ịkparịta ụka n'socialntanet | Martech Zone
Tag: ịkparịta ụka n'socialntanet
Kedu ihe bụ Mmetụta nke Ahịa Mgbasa Ọha?
Gịnị bụ ahịa mgbasa ozi? Amaara m na nke ahụ dị ka ajụjụ elementrị, mana ọ kwesịrị ka a tụlere ya. Enwere ọtụtụ akụkụ na nnukwu usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta yana mmekọrịta chiri anya ya na usoro ntanetị ndị ọzọ dịka ọdịnaya, ọchụchọ, email na mobile. Ka anyị laghachi na nkọwa nke ahịa. Ire ahia bu oru ma obu oru nke nyocha, ime atumatu, imezu, ikwalite na ire ahia ma obu oru. Social media bụ a
Oju mmiri, Upselling, na Downstream Marketing Ohere Maka Uto Azụmaahịa
Sọnde, Febụwarị 7, 2021 Sọnde, Febụwarị 7, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ n ’ịjụ ọtụtụ ndị mmadụ ebe ha hụrụ ndị na-ege ha ntị, ị ga-enweta azịza dị warara. Imirikiti ọrụ mgbasa ozi na ịzụ ahịa jikọtara ya na nhọrọ ndị na-ere ahịa nke njem onye na-azụ ahịa… mana nke ahụ akarịala oge? Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbanwe mgbanwe dijitalụ; dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike mejupụta nkọwa niile na mpempe akwụkwọ site na ịlele atụmanya gị ugbu a ma dabere na usoro ị maara nke ọma. I nwere ike ime
Bizzabo: Ike Gị na Onye na Virtual Ihe na Single Platform
Fraịde, Ọktọba 2, 2020 Fraịde, Ọktọba 2, 2020 Douglas Karr
Bizzabo bụ usoro ihe omume na-aga nke ọma nke na-enye ndị otu gị ngwaọrụ niile ha chọrọ iji mepụta ihe omume na-akwụghachi ụgwọ mgbe ị na-eche echiche iji nyere gị aka ịme ihe n'ụzọ ị na-echeghị na ọ ga-ekwe omume. Atụmatụ Bizzabo Event Platform Ihe omume Bizzabo niile na-eme na-enyere mmadụ aka na ihe omume dị iche iche iji nyefee ahụmịhe ndị bịara abịa pụrụ iche site na ọgụgụ isi na ebumnuche dabere na njikọ aka ahaziri iche. Ndebanye aha Mmemme - chikọta ndị ọbịa gị nke ọma ka ha wee nweta ahụmịhe na ụdị dị iche iche bara ọgaranya na nke bara ụba
Friday, October 2, 2020 Friday, October 2, 2020
Uru nke njikọ na Influencer
Anyị na-aga n'ihu na-agba mgba n'etiti ụlọ ọrụ ndị nwere mmetụta na ọnụọgụ ihe efu na ọnụ ọgụgụ dị elu. M na-akatọ ụlọ ọrụ ahụ kemgbe mmalite ya na mgbasa ozi mmekọrịta na ọtụtụ usoro na nyiwe anaghị atụ mmetụta, ha na-atụle nha nke netwọkụ, ndị na-ege ntị, ma ọ bụ obodo. Mụ onwe m nwere nnukwu netwọkụ… nke na ọ na-abụkarị isi ike na ọ na-esiri m ike ịme ezigbo mmekọrịta mụ na ọtụtụ ndị m na-asọpụrụ.
Monday, October 8, 2018 Monday, October 8, 2018 James kwa ụbọchị
You maraworị na ị nweghị ego ịzụ ahịa iji soro “ụmụ okoro” na-asọ mpi. Mana ozi ọma bụ nke a: ụwa dijitalụ nke ịre ahịa emeela ka ubi ahụ dịka ọ dịtụbeghị mbụ. Obere ulo oru nwere otutu ebe na uzo esi abuo di nma ma di kwa ala. Otu n'ime ndị a, n'ezie, bụ ịre ahịa ọdịnaya. N'ezie, ọ nwere ike ịbụ ihe kachasị ọnụ ahịa-azụmaahịa niile. Nke a bụ usoro azụmaahịa ọdịnaya
Facebook ọ na-atụle LinkedIn maka ịkparịta ụka n'Businessntanet?
Tọzdee, Disemba 30, 2014 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Anyị na-ebi na ntanetị nke na-arịwanye elu. Richard Madison nke Brighton School of Business & Management mepụtara ihe omuma a nke na-enyocha uru iji Facebook na LinkedIn maka ịkparịta ụka n'andntanet na Marketingzụ ahịa. You maara na e nwere ndị ọrụ 1.35 na Facebook, yana ebe ana eleghara netwọlụ anya dị ka ndị ọrụ aka ọkachamara nwere ibe azụmahịa 25 nde? Ihe omuma a na-enyocha ohere puru iche nke ikpo okwu obula na enye ndi okacha amara
Ha anaghị akụzi nke a na klaasị ahịa
Tuzdee, Machị 11, 2014 Douglas Karr
Ekwetaghị m na ọ bụ ihe nzuzo, mana ekwenyere m na atụmatụ kachasị nke ọma a na-elegharakarị na ahịa na azụmaahịa bụ uru nke netwọkụ gị. Ndị mmadụ na-elekwasị anya na nloghachi na ntinye ego, ọnụ ọgụgụ, nyocha, akara, ịmepụta, atụmatụ, arụmọrụ, nrụpụta, wdg ka ha na-arụ ọrụ site na mbọ ahịa ha. Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ịkọwaa ihe ndị ahụ niile, ọ nweghị nke ọ bụla nye gị ụzọ nke ego azụmaahịa gị